I-HPHT yeLebhu ekhulile yabavelisi bedayimani - China I-HPHT yeLebhu eQhelekileyo yeDayimani yefektri kunye nababoneleli
I-SI1-SI2 B yeBanga le-HPHT Indoda yenze ilitye leDayimani kwiiJewel
I-SI1-SI2 B yeBanga le-HPHT Indoda yenze ilitye leDayimane kwiiJewels Yintoni i-Lab ekhulile iDayimane Umahluko phakathi kwendalo kunye nelebhu ekhulile idayimani evela kwindlela eyenziwe ngayo. Iidayimane ezikhulileyo zelebhu zenziwe ngabantu kwilebhu ngelixa iidayimani zendalo zenziwe emhlabeni. Iidayimani zokuqala zokwenziwa eziyimpumelelo zenziwa ngokulingisa indalo ngokuvelisa koxinzelelo oluphezulu / ubushushu obuphezulu (HPHT). Zintathu iinkqubo zokuvelisa ezisisiseko ezisetyenziselwa ukwenza iidayimani ze-HPHT: umatshini webhanti, umatshini wokushicilela we-cubic, ...
I-VS VVS yeLebhu ye-HPHT yeLebhu eMdaka ngeDayimane
VS VVS IBanga le-HPHT elenziwe ngeLitye eliDayimani eliMhlophe Yintoni i-Lab ekhule ngeDayimane Umahluko phakathi kwendalo kunye nelebhu ekhule ngedayimani yendlela eyenziwe ngayo. Iidayimane ezikhulileyo zelebhu zenziwe ngabantu kwilebhu ngelixa iidayimani zendalo zenziwe emhlabeni. Iidayimani zokuqala zokwenziwa eziyimpumelelo zenziwa ngokulingisa indalo ngokuvelisa koxinzelelo oluphezulu / ubushushu obuphezulu (HPHT). Zintathu iinkqubo zokuvelisa ezisisiseko ezisetyenziselwa ukwenza iidayimani ze-HPHT: umatshini webhanti, umatshini wokushicilela we-cubic, kunye ne-sp ...